Mero Report :: सामुदायिक अनुसन्धानकर्ता
याे समुह तथ्यमा अाधारित पैरवीका लागी अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूकाे समूह हाे ।
ललितपुर । ०७५ फागुन २० गते, गीता तिमल्सिना
Feb 25, 2019 Monday
प्रमाणमा आधारित सहभागिमूलक अनुसन्धान संक्षिप्त प्रतिवेदन
कोञ्ज्योसोमः पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रचारको खाँचो
अध्ययन विधि प्रकृया
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरू
विद्यमान अवस्था र सम्भावनाका क्षेत्र
नयाँ संरचना अनुसार चौघरे, सङ्खु, दलचोकी, नल्लु र भारदेव गाविस मिलाएर कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका बनाइएको हो । यो गाउँपालिकामा पाँच ओटा वडा छन् । ४४ दशमलब १६ वर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको यो गाउँपालिकामा ९ हजार ७ सय ९ जनाको बसोबास छ ।
‘लेलेको फाँट सकिएपछि उकालो यात्रा । छेउभित्तो दुबैतिर घना जङ्गल । बसहरुसमेत होस्टे हैंसे गर्दै लाग्नु पर्ने उकालो ! घुम्ती त्यत्तिकै ! साँघुरो बाटो । घुम्तीमा पटकपटक दुर्घटना होलाजस्तो जम्काभेट हुन्छ विपरीत दिशाबाट आएका सवारी साधनको । उकालो सकिनेबित्तिकै भेटिने नल्लु भञ्ज्याङ । भञ्ज्याङ् नपुग्दै एउटा तीर्थ जाने बाटो आउँछ । पाथिभरा मन्दिर । ताप्लेजुङको होइन । ताप्लेजुङबाट प्रतिमा ल्याएर विधिपूर्वक स्थापना गरिएको मन्दिर । त्यसो त लेलेमा नै मनकामना छाडिन्छ । यहाँका स्थानीयले बडो मेहनतसाथ बनाएको मन्दिर । भञ्ज्याङमा पुगेपछि एकैछिन नरोकिए यात्रा अपूरो र अधुरो हुन्छ । यात्र फिका र मधुरो हुन्छ । यहाँबाट एकातिर फर्कँदा काठमाडौँ खाल्डो देखिन्छ । ठिक विपरीत फर्कँदा सिङ्गो गाउँले जनजीवन आँखैमा आउँछ । डाँडाकाँडा, पाखा पर्वत । अनि फाट्टफुट्ट घर । नल्लुबाट भारदेवतर्फ लागेपछि गाउँले जीवन सुरु हुन्छ । लेलेसम्म गोदावरी नगरपालिका र नल्लुदेखि कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका । कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा जम्मा पाँच ओटा वडा छन् । कोञ्ज्योसोम भनेको चाँही बुद्धका तीन रूप अरे ! कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुबिन्द्र तामाङले भने–‘स्वयम्भूमा रहेका बुद्धका तीन रूपलाई कोञ्ज्योसोम भनिन्छ ।’ उनका अनुसार यो ‘पहिचान’को नाम । तामाङ बाहुल्य क्षेत्र भएकाले पहिचानका आधारमा गाउँपालिकाको गठन गरिएको भन्छन् यहाँका जान्ने सुन्नेहरू । चौघरे, शङ्खु, दलचोकी, नल्लु र भारदेव यहाँका पाँच ओटा वडा । यो यात्रामा हामी नल्लुबाट प्रवेश गरी भारदेव र चौघरे हुँदै महाङ्काल गाउँपालिका पुग्छौँ । महाङ्काल गाउँपालिकामा चाँही ६ ओटा वडा छन् । पहिलाका बुखेल, मानिखेल, गोटिखेल, चन्दनपुर, कालेश्वर र ठूलादुर्लुङ गाविस मिलाएर बनाइएको गाउँपालिका । सातदोबाटोदेखि टिकाभैरबसम्मको बाटोलाई देवकोटा मार्ग र टिकाभैरबदेखि चन्दनपुरसम्मको बाटोलाई लेले–चन्दनपुर मोटरबाटो नामाकरण गरिएको छ ।
काठमाडौँको टुँडिखेलबाट सुरु गरिएको यात्रालाई ललितपुरको जावलाखेल पुगेपछि लगनखेलतिर मोड्नुपर्छ । त्यहाँबाट थसिखेल नपुगी ताल्सिखेलबाट धापाखेल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यहाँबाट ताहाखेल हुँदै गएपनि टौखेलतिर चाँही लाग्नु पर्दैन । त्यसपछिको लामो यात्रासँगै मानिखेलको कतवन भञ्ज्याङ पुगिन्छ । मानिखेलबाट गोटिखेल जान बुखेलतिर गइरहनै पर्दैन । यसरी टुँडिखेलदेखि गोटिखेलसम्म पुग्न लगभग साँढे दुई घण्टा लाग्छ । तर, बिचबिचमा रोकिइरोकिइ जाँदा अझ धेरै समय लाग्छ । यो बाटोमा नियमितजसो ओहोरदोहोर गर्नेहरू त एक÷डेढ घण्टामै पुगिहाल्छन् ।
२०४२/०४३ सालदेखि खन्न सुरु गरिएको बाटो अहिले पनि निर्माणाधीन नै छ । हुन त बाटो पिच छ । तर, सिङ्गल ट्रयाक मात्रै । कामका लागि खाद्यान्न अन्तर्गत खनिएको यो बाटोमा निकै पसिना चुहाइएको बताउँछन् यहाँका अधवैँसेहरू । नल्लु भञ्ज्याङबाट केही अगाडि भारदेव गाउँ पुगिन्छ । भारदेवबाट केही मोड घुम्दै उकाले लागेपछि चौघरेको सिँगाने भञ्ज्याङ् पुगिन्छ । तर, अहिले यो भञ्ज्याङ्लाई ‘सिम भञ्ज्याङ्’ नाम दिइएको छ । सधैँजसो चिसो हुँदा सिँगान चुहिरहने भएकाले सिँगाने भञ्ज्याङ् भनिएको बुढापाकाहरू बताउँछन् । तर, ठिटाठिटीहरू चाँही यो कुरा मान्दैनन् । सिम् जस्तो चिसो भइरहने हुनाले सिम भञ्ज्याङ् नै उपर्युक्त नाम हुने हुँदा सिम भञ्ज्याङ् कै नामलाई महत्व दिनुपर्ने युवा पुस्ताको भनाई छ । चाहे जे होस् यो भञ्ज्याङ्मा पुगेपछि तामाङ/तामाङ्नीले पकाएका तात्ताता मालपुवा र तरकारीले जो कोहीको मन लोभिन्छ नै ! जहिले जाँदा पनि यहाँका मालपुवा र तरकारी उत्तिकै मिठो । सायद चिसो ठाउँ भएकाले मिठो भएको होला । यहाँ मौसममौसमका खानेकुरा किन्न पनि पाइन्छ । गाउँलेहरूले विशाल जङ्गल (जसलाई महाभारत सृङ्खला भनिन्छ ।) बाट ल्याएका निहुरो, डाँठे, जङ्गली च्याउ (मृगे, छाते आदि), काफललगायतका केही न केही किन्न पाइन्छ । च्याउ किन्दा चाँही होसियारी अपनाउनुपर्छ । तर, स्थानीयहरू वर्षौँदेखि यही काममा तल्लीन छन् । उनीहरू विषालु च्याउ चिन्ने ठोकुवा गर्छन् ।’
यो परिदृष्यमा राजधानी नजिकैको यो गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी गाउँपालिकाले काम गर्नु सान्दर्भिक छ । स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन सरोकारवाला पक्षको पनि कर्तव्य हो । तसर्थ पर्यटन प्रवर्धनको पहिलो काम प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको शासकीय संरचना तीन तहको सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अभ्यास हो । यही संरचनाबाट नागरिकको अधिकार सुरक्षित गराइराख्न र स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको आस्थालाई थप बलियो बनाउन स्थानीय सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । यस अध्ययनका कारण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र जबाफदेहीता बढ्न गई पर्यटनसम्बन्धी कामका लागि अभियान सञ्चालनका कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१. कोञ्ज्योसोमको पर्यटनः सम्भावना पहिचानका लागि
३. स्थानीय र जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणकाबारेमा थाहा पाउनका लागि
३. पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रचारप्रसारको आधार तय गर्नका लागि
यो अध्ययनका लागि सबैभन्दा पहिला कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाको भूगोल र पर्यटकीय स्थलबारे सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गरियो । त्यसपछि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिङ्मा लामा तथा प्रवक्ता सुविन्द्र तामाङसँग छलफल गरियो । स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरियो ।
मिङ्मा तामाङ, उपाध्यक्ष, कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका
चौघरे गाउँपालिकाको केन्द्र भएकाले यहाँ विविध किसिमका सम्भावना छ । मानिसको आउजाउको केन्द्र पनि चौघरे नै हुन्छ । वडा नं २ सङ्खुमा हामी कृषि पर्यटनका हिसावले विकास गर्दैछौँ । यहाँ कृष्ण प्रणामी मन्दिर र तमाङ सङ्ग्राहलयमार्पत पर्यटक तान्ने योजनामा छौँ । त्यसैगरी वडा नं ३ दलचोकीमा यस अघि नै पर्यटक तान्ने गरी काम सुरू भइसकेको छ । यहाँ मनकामना मन्दिर र भ्यू टावरमार्पत पर्यटकलाई थप आकर्षण गराउन सकिन्छ । वडा नं ४ नल्लुमा पाथिभरा मन्दिर र नल्लु डाँडाले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । त्यसैगरी भारदेवमा कोञ्ज्योसोम शान्तिबाटिका र गुप्तेश्वर गुफालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कोञ्ज्योसोमलाई पर्यटकको ‘हब’ क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।
लालबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति
चौघरेबाट मनोरम काठमाडौँ, हिम सृङ्खला, कालेश्वर महादेव मन्दिर भएको डाँडो र काभ्रेको नारायणस्थान मन्दिर भएको डाँडो सहजै देख्न सकिन्छ । प्राकृतिक वातावरण, प्राङ्गारिक खानेकुरा, बनको निहुरो र च्याउमार्पत यहाँको पर्यटनलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
सुविन्द्र तामाङ, अध्यक्ष, वडा नं ५ तथा प्रवक्ता कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका
दलचोकीको भ्यू टावर, भारदेवको कोञ्ज्योसोम प्रतिमा र शान्ति बाटिकाको डिपिआर तयार गरी बजेट छुट्याइएको छ । काम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ । प्रचारप्रसारको पाटोमा थप काम गर्न सके पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान सार्थक हुन्छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरु
अध्ययनबाट गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यारम्भ गरेको पाइयो । तर, प्रचारप्रसारको कमी रहेको पाइयो । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह र जाँगर देख्दा केही गरौँ भन्ने भावना रहेको पाइयो । स्थानीय स्तरमा होटल, रेष्टुराँको व्यवस्थापन भने हुन सकेको देखिएन । सामान्य खाजाघरबाहेक दलचोकीमा एउटा होम स्टे रहेको पाइयो । पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना रहेको कोञ्ज्योसोम पर्यटन विकासका काममा भने भर्खरै बामे सर्दै गरेको पाइयो ।
विद्यमान अवस्था र पर्यटन सम्भावनाका क्षेत्र
१) आर्थिक पक्ष
क) कोञ्ज्योसोमबासीको आर्थिक उपार्जनको मूल स्रोत परम्परागत कृषिको । परम्परागत कृषिबाट यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या सहज देखिँदैन । जसका कारण यहाँका काम गर्नसक्ने युवा खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । यसका साथै दैनिकी सञ्चालनका लागि अवैध मदिरा उत्पादन र विक्री यहाँका बासिन्दाको अर्को बाध्यता हो । अवैध रुपमा मदिरा उत्पादन र विक्रीका कारण धेरैपटक यहाँबाट चापागाउँ बजार बेच्न लगेको मदिरा प्रहरीले जफत गरेर पोख्ने गरेको छ ।
यहाँका बनपाखामा फल्ने काफल, पैयुँ, ऐँसेलु, चुत्रो, लप्सीलगायतका फलपूmल सङ्कलन, धसिँगरेलगायतका जडिबुटी सङ्कलन र प्रशोधन तथा आलुपखराको रक्सी, फर्सीको सस बनाउने जस्ता उद्योग खोलेर कानुनबाट प्रतिबन्धित कामबाट वैधानिक काममा र विदेशिने श्रमशक्तिलाई गाउँमै रोकेर उत्पादनमूखी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गाउँकै लगानीकर्ता वा गाउँबाहिरका लगानीकर्तासँग, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग तथा साना उद्योग व्यवसायीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । पर्यटकको आगमनसँगै उद्योगको आकार बढ्नेमा त शङ्कै छैन ।
यहाँ होटल तथा उद्योग व्यवसायले कुनै पनि आकार ग्रहण गरेको छैन । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको होटल, घरबास (बसोबास र खानपिन) पनि हो । यही कुराको अभावमा पर्यटक आइहालेमा राख्नै समस्या छ ।
२) भौगोलिक पक्ष
क) भूगोल पृथ्वीको बनोट हो । यसमा धेरै तोडमोड गर्न सकिन्न । तर, यहाँको भूगोल दूरीका हिसावले होस् वा डाँडाकाँडाको हिसावले नै किन नहोस् पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने किसिमको छ । वर्षैपिच्छे हिउँ पर्ने र झण्डै १०–१५ दिनसम्म रहिरहने खालका डाँडादेखि लहलह परेका फाँट र वनजङ्गलको क्षेत्र यहाको भूगोलमा समेटिन्छ । यस्तो भूगोलसहितको वृत्तचित्र वा अन्य कुनैपनि माध्यामबाट प्रचारप्रसार गर्न सके पर्यटकको ओइरो लाग्नेमा शङ्कै छैन । भौगोलिक रूपमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो कोञ्ज्योसोम ।
३) सांस्कृतिक पक्ष
क) नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । नेपालकै झल्को दिन्छ कोञ्ज्योसोमले । पहिचानका आधारमा नाम राखिएको कोञ्ज्योसोम तामाङ बाहुल्य क्षेत्र हो । तामाङ जातिको रहनसहन, खानपान र बुद्ध धर्मको आस्था तथा संस्कारका कारण पर्यटकलाई तानिरहने बनाउन सक्छ कोञ्ज्योसोमले । तामाङहरू धर्म मान्ने सूचीमा नाम लेखाउँदा बुद्ध लेख्छन् । तर, उनीहरूको हिन्दु भगवानप्रतिको आस्था हिन्दु धर्म मान्ने जत्तिकै छ । भारदेवमा रहेको गुप्तेश्वर गुफा तामाङहरूको आस्थाको धरोहर नै हो । हिन्दु धर्म अनुसार ‘श्वर’ आएका धार्मिक केन्द्र महादेवप्रति लक्षित हुन्छन् । त्यस्तै गाउँले जीवनको रहनसहन यहाँको अर्को महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष हो । यसलाई टिकाइराख्न र प्रचार गर्न सके यहाँको पर्यटनलाई ठूलो मद्दत मिल्नेछ । तामाङ सेलोमा रातिसम्म नाचगान गराउने र खानपिन गराउने व्यवस्था मिलाउन सके सांस्कृतिक संरक्षणका साथै आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने स्थानीय हरि तामाङले बताए ।
सरोकारवाला पक्ष, पत्रकारलगायतले व्यापक प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा यहाँको पर्यटन ‘विक्री’ हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि नविनतम सोचको खाँचो छ । स्रोतको भन्दा पनि सोचको व्यवस्थापनबाट यो काम गर्न सकिन्छ र कोञ्ज्योसोमलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यहाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी केही होटल (बाससहितको) र होम स्टेमार्फत पाहुनालाई सत्कार गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसबाट पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ ।
नी दैनिकमा प्रकाशित लेख